भारतीयको पोस्टर चोरेपछि विवादमा घेरिए पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री - Onlinenews Global
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान अहिले विवादमा तानिएका छन् । आफ्नो सरकारको प्रचार गर्नका लागि सार्वजनिक गरिएका पोस्टर र ब्यानरमा भारतीय जनताको फोटो समावेश गरेको आरोप विपक्षीहरुले उनीमाथि लगाएका हुन् ।
तीन वर्षका उपलब्धिको बयान पाकिस्तानमा इमरान खान प्रधानमन्त्री चुनिएको तीन वर्ष पुगेको छ । यस अवसरमा उनले आफ्ना उपलब्धिबारे जनतालाई जानकारी दिन र आफ्नो पार्टी पिटिआईको प्रचार गर्नका लागि पोस्टर, ब्यानर र पर्चा छपाउन लगाएका थिए । आगामी चुनावको तयारीलाई समेत मध्यनजर गरेर यस्तो गरिएको थियो ।
ट्वीटमार्फत मरियमले यस्तो आरोप लगाएकी हुन् । उनका अनुसार इमेजबजार डटकम नामक भारतीय वेबसाइटबाट यी तस्विर तानिएका हुन् ।
‘देशमा बेरोजगारी र महँगी यति धेरै बढेको छ कि सरकारलाई झुठ बोल्नका लागि भारतका तस्विरहरुको सहारा लिनु परिरहेको छ । अब त प्रमाण बाहिर आइसकेको छ । पाकिस्तानको खुसीको तस्बिर सरकारले कसरी ल्याओस् ? यदी यो सरकारले केही काम गरेको हुन्थ्यों भने भारतीयको तस्बिरको प्रयोग किन गरिन्थ्यों ? यो चोरको सरकार हो, जसले चोरेर काम चलाइरहेको छ,’ मरियमले लेखेकी छिन् ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
जानिए सोनाक्षी सिन्हा के आलिशान ८ मंजिला घर ”र�...